Javier Reverte: mabhuku ekufamba nyika, anoshanda kurarama | Zvazvino Zvinyorwa
Javier Reverte: Mabhuku
Kana uchibvunza pawebhu nezve "Javier Reverte mabhuku", mhedzisiro huru inonongedzera ku Africa Trilogy. Iyi saga nderimwe remabasa anozivikanwa evaSpanish; mariri anotiratidza chiratidzo chake cheiyi kondinendi inoshamisa. Reverte aifarira uye aida kuziva mufambi uyo aiziva kubata nepeni yake chaiyo pena akati wandei yemablog ake kutenderera pasirese.
Paaifamba nemunzvimbo dzine mifananidzo, akanyora tsananguro dzechokwadi dzenzvimbo uye nevanhu vaaiziva. Mune zvinyorwa izvi, airatidzira yega yega yemanzwiro ake nemaonero, ayo aakazowedzeredza nedata renhoroondo. Rondedzero yake yakapfuma yakamutendera kuti awane mazana ezviuru zvevaverengi vanokoshesa kugona kufamba pese pavanoshanyira mabhuku ake..
1 Mabhuku akanakisa naJavier Reverte
1.1 Iyo African Kurota (1996)
1.2 Mwoyo weUlysses (1999)
1.3 Rwizi rwekuparadza. Rwendo kuburikidza neAmazon (2004)
1.4 Nguva yeHeroes (2013)
2.4 Inoshanda naJavier Reverte
2.4.1 Mabhuku ekufambisa
Mabhuku akanakisa naJavier Reverte
Kurota kweAfrica (1996)
Iri ibhuku rekufamba uko munyori anotsanangura rwendo rwake kuburikidza neEast Africa uye anotanga saga Africa Trilogy. Iwo mafambiro akaita denderedzwa anotangira muKampala (Uganda), anoenderera kuDar es Salaam (Tanzania) uye anoperera muKenya. Basa racho rinoratidza zvakawanda zvenhoroondo yedunhu iri, kukoloniwa kwayo nevanhu veEuropean uye kupunzika kwemamongi eAfrica.
Quote naJavier Reverte
Reverte anorondedzera zvakadzama rwendo rwake kuburikidza nenharaunda yemashiripiti izere nehupenyu, aine ese akasuwa uye anofara nuances. Zvakare, munyori inofumura zvisungo zvehukama zvaakavaka nezvizvarwa zvakasiyana siyana zvaakagovana navo. Uye zvakare, pakati pemitsetse inoreva kune vamwe vanyori vakakosha vakashanyira nekunyora nezve kondinendi, pakati pavo: Hemingway, Haggard uye Rice Burroughs.
Kurota kwe Africa ...
Ulysses Mwoyo (1999)
Pane ino nguva, maSpanish anofamba achipfuura nekumabvazuva kweMediterranean uye inotsanangura kushanya kwake kunyika nhatu: Greece, Turkey neEgypt. Reverte inoita kuti iwe uone akasiyana manzwiro anokonzerwa nekuuya kwakawanda mutsika, tsika uye zvinyorwa. Munguva yekukudziridzwa kwayo, dzimwe nzvimbo dzenyika nhatu dzakatsanangurwa, uye rondedzero inozadzikiswa nengano pamusoro pengano dzechiGiriki uye zvimwe zvinoitika zvakaitika.
Ipo kuvandudzwa kwechinyorwa kuchienderera humwe hunhu - chaihwo uye hwekunyepedzera - anomiririra enguva dzekare anosanganisirwa. Izvi zvinosanganisira: Homer, Ulysses, Helen weTroy naAlexander Mukuru. Mukufamba kwese, Reverte inosimbisawo nzvimbo dzakakosha, senge mugungwa weTurkey, Peloponnese, Rhode, Ithaca, Pergamo, Korinde, Atene, Kastellorizon Island, uye Alexandria.
Mwoyo weUlysses (Zvakanakisisa ...
Rwizi rwekuparadza. Rwendo kuburikidza neAmazon (2004)
Pane ino chiitiko, mufambi akanyudzwa murukova rwesimba rinotyisa, izere nengano uye zviitiko: Amazon. Sezvo ichipinda mumvura yeAmazon, reverte inorondedzera zvidimbu zverudzi nyaya. Rwendo rwacho runotanga muna Chikumi 2002 muguta reArequipa, kumaodzanyemba kwePeru. Chinangwa chekupedzisira ndechekusvika uko kwakazvarwa mutero wakakura kudai: iyo Nevado del Mismi.
Pakati penzira yake, pamusoro pekuziva mamwe maguta nemadhorobha, Reverte zvakare inobata nevagari vemumahombekombe erwizi rwengano. Iyo nzira inobvumidza kukwira zvikepe zvevafambi, magwa uye kunyange ndege pane dzinoverengeka nguva. Kunyangwe achirwara nemalaria, munyori anokwanisa kupora uye kupedzisa rwendo rwake muBrazil Atlantic.
Rwizi rwe ...
Nguva yemagamba (2013)
Iyo inoverengeka nezve hupenyu hweGeneral Juan Modesto, aishanda sa mukuru wemauto echikominisiti muSpanish Civil War. Iyo nyaya inotanga munaKurume 1939, mukati memazuva ekupedzisira ehondo yekurwa. VaRepublicans vari kugadzirira kusiya masimba uye maFrancoist achifambira mberi nekukunda kwazvino. Panguva iyoyo, Modesto - pamwe nevamwe vemauto - vakaronga kubuda kwehurumende.
Iyo rondedzero inotsanangura zvinoitika zvehupenyu hwega hwega, sekurangarira kwehudiki hwake uye zvidimbu zvidiki zvehupenyu hwake hwerudo. Zvichakadaro hondo dzaakarwa dzakarondedzerwa uye kuti mauto akakunda sei kutya kwavo. Kuvimbika uye kushamwaridzana, zvakazadza mauto ne gallantry kukunda nguva dzakaomesesa.
Nguva yemagamba ...
Javier Martinez Reverte Iye akazvarwa neChishanu, Chikunguru 14, 1944 muMadrid. Vabereki vake vaive: Josefina Reverte Ferro uye mutori wenhau Jesús Martínez Tessier. Kubva achiri mudiki aifarira basa rababa vake, chimwe chinhu chaigona kuonekwa mukuda kwake kunyora. Kwete pasina akafunga kuita zvidzidzo zveyunivhesiti muFilosofi uye Utapi venhau.
Mushure mekupedza kudzidza, Akashanda kweanopfuura makumi matatu emakore semunyori wenhau mune dzakasiyana nhepfenyuro dzeSpanish. Mune ruzivo rwake rwebasa, makore ake masere (8-1971) semunyori wenhau mumaguta akadai seLondon, Paris neLisbon anomira. Muhupenyu hwake hwese akashandawo mune mamwe mabasa ane chekuita nebasa rake, senge: mutori wenhau, wezvematongerwo enyika munyori, edhisheni munyori, uye mupepeti-in-mukuru.
Akatora nhanho dzake dzekutanga semunyori kuburikidza zvinyorwa zveredhiyo neterevhizheni zvirongwa. Mukutanga kwema70 akaisa pfungwa pane zviviri zvezvido zvake: mabhuku uye kufamba.. Muna 1973 akapinda zviri pamutemo munhandare ine zvinyorwa Iko kunakidzwa kweUlysses, kushanda kwaakatora zvimwe zvezviitiko zvake seglobetrotter.
Mumakore makumi masere 'akashinga kupinda mune mamwe marudzi: nhoroondo uye nhetembo. Yakatanga nekuburitswa kwemanoveli: Zuva rinotevera-kune-rekupedzisira (1981) uye Kufa kusingatarisirwi (1982), uye gare gare muunganidzwa wenhetembo Metropolis (1982). Akaenderera mberi nemabhuku ekufambisa uye muna 1986 akapa saga yake yekutanga: Central America Trilogy. Izvi zvinoumbwa nemanovels matatu maanotsanangura makore akaoma enharaunda panguva iyoyo.
Reverte yakavaka yakawandisa uye isinganetsi mabhuku ekunyora, aine huwandu hwemakumi maviri nemana ezvinyorwa kubva mukufamba kwake akatenderera pasirese, 24 enganonyorwa, mana mabhuku enhetembo uye pfupi nyaya. Pakati pemabasa ake akatanhamara ndeaya: Kurota kweAfrica (1996, Africa Trilogy), Ulysses Mwoyo (1999), Stowaway Traces (2005), Rwizi rwechiedza. Rwendo kuburikidza neAlaska neCanada (2009) uye rake rekupedzisira basa: Munhu kudiridza (2021).
Munguva yebasa rake rekunyora yakapihwa katatu. Yekutanga, mu 1992 pamwe neMadrid Book Fair Novel mubairo we Munhu wehondo. Zvino mune iyo 2001 akagamuchira Novel Ciudad de Torrevieja ye Husiku hwakamira (2000). Kuzivikanwa kwake kwekupedzisira kwakapinda 2010, naFernando Lara de Novela we Zero nharaunda.
Javier Reverte akafira kumusha kwake, Gumiguru 31, 2020. Izvi, chigadzirwa chekutambura nekenza yechiropa.
Inoshanda naJavier Reverte
Iko kunakidzwa kweUlysses (1973)
Central America Trilogy:
Vanamwari vari mumvura. Nikaraguwa (1986)
Kunhuwirira kweCopal. Gwatemara (1989)
Murume wehondo. Hondurasi (1992)
Kugamuchirwa kuGehena. Sarajevo Mazuva (1994)
Vagabond in africa (1998)
Migwagwa yakarasika ye Africa (2002)
Mwoyo weUlysses. Greece, Turkey neEgypt (1999)
Imwe nzira tikiti (2000)
Ziso retsitsi (2003)
Kunakidzwa kwekufamba (2006)
Rwiyo rwaMbama (2007)
Rwizi rwechiedza. Rwendo kuburikidza neAlaska neCanada (2009)
Mumakungwa emusango. Rwendo rwekuArctic (2011)
Makomo anopisa, madziva emoto (2012)
Mamiriro epasi (2013)
Yechirume matsutso (2014)
A chinese zhizha (2015)
Zuva rinotevera-kune-rekupedzisira (1981)
Kufa kusingatarisirwi (1982)
Strawberry minda zvachose (1986)
Mukadzi wegomba rakadzika (1988)
Zvese zviroto munyika (1999)
Husiku hwakamira (2000)
Chiremba waIni (2005)
Umambo hwenyu ngahuuye (2008)
Ishe Paco (1985)
Nharaunda Zero (2010)
Nguva yeHeroes (2013)
Mireza muMist (2017)
Munhu Pabhodhi (2021)
Gomo rakakuvara (1985)
Nhetembo dzemuAfrica (2011)
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Mabhuku » Javier Reverte: Mabhuku
Francisco de Quevedo. Chirangaridzo cherufu rwake. Sonnets
Marta Gracia Maponi. Kubvunzana nemunyori weRwendo rweChikara